Taorian'ny fanapahan-kevitry ny fitondrana ny ampiato ny fiara fitaterana iombonana sy ireo taxi, nefa ireo mpiasam-panjakana ihany no mijanona an-trano fa ireo manao velon-tena sy mpiasa orin'asa tsy miankina dia tsy maintsy mamonjy ny asany, dia tazana ireo fiaran'olon-tsotra lasa nivadika nanao taxi clandestin na jonobotry mitambatambatra saram-pitaterana. Maro ihany koa ireo moto izay mizara ny laharana finday mihitsy maka sy manatitra mpiasa. Mahatsiaro voan'ny tsindrian'ila ihany ireto mpitatitra nefa tsy misy fanonerana ny banga na fanamaivanana ny hetra izay tsy maintsy aloa amin'ny faran'ny volana marsa izao.
Nosintonin’ny Polisy avokoa ireo taratasy fahazoan-dalana ny fiaran'ireo Taxi na Taxi-be tratra mitondra olona nivezivezy teto Antananarivo renivohitra nanomboka tamin’ity maraina ity. Izany dia ho fanatanterahana ny didy navoakan'ny fitondram-panjakana amin'ny tsy tokony hisian'ny fiara iombonana miasa na koa ireo taxi hifehezana ny fiparitahan’ny valanaretina coronavirus. Voakasik’ity fepetra ity ny faritra Analamanga sy ny tanànan’i Toamasina « Tsy misy intsony ny fanentanana fa ny sazy avy hatrany no mihatra ho an'izay minia mandika lalàna ho fiarovana ny ain'ny vahoaka », hoy ny avy eo anivon’ny Polisim-pirenena.
Misy ny fakana hafanana an’ireo mpandeha rehetra avy any Toamasina miditra ny tanànan’i Vavatenina, nanomboka androany alahady 22 marsa 2020. Hihatra mandritra ny 15 andro, andro aman’alina, io fepetra io, ho fisorohana ny fihanaky ny Covid-19. (Jereo Sary Tohiny)
Tamin’ny alarobia 11 marsa 2020 no nahitana voalohany olona voan’ny coronavirus tatsy amin’ny nosy La Réunion. Nisy tranga 17 hita androany, ary dia tafakatra 64 ireo voan’ny coronavirus ao amin’ity nosy ity. Ao amin’ny efitra fameloman’aina ny roa amin’ireo, iray efa sitrana. Tsy mbola nisy kosa namoy ny ainy tamin’ireo narary.
Nanao fanambarana ny praiminisitra maorisiana Pravind Jugnauth, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety nataony androany hariva fa tafakatra roa ny olona namoy ny ainy noho ny coronavirus, ka teratany maorisiana ity faharoa ity, maty androany na dia notsaboina aza. Nambarany ihany koa, fa hihatra ao amin’ity nosy ity, ny « couvre-feu sanitaire » manomboka rahampitso alatsinainy 23 marsa 2020 amin’ny 8ora alina ka hatramin’ny alakamisy 2 aprily amin’ny 8ora alina. Miisa 24 izao ny olona voamarina fa voan’ny coronavirus ao Maorisy. (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Paulin Joelison
Napetraka eo amin’ny Pont Sambirano sy eo amin’ny Fokontany Ambalavelona ny « barrage sanitaire » roa mivoaka sy miditra ny tanànan’i Ambanja, Faritra DIANA ho fisorohana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus. Ao amin’ny « Gare routière » efa vita fa tsy mbola niasa eo amin’ny Fokontany Mahavelona no hanaovana fanokana-monina ireo olona mafana hoditra, isany fambara Covid-19, mandritra ny fitsapana hafanana azy eo amin’ny « barrage sanitaire ». Tsy mankasitra io fepetra io anefa ny mponina ao amin’io Fokontany io. Mikoropaka ny olona taorian’ny nandrenesana ny fanambarana nataon’ny filoham-pirenena fa misy olona voan’ny coronavirus eto Madagasikara, ny alin’ny zoma teo. Omaly sabotsy, ampitson’io fanambarana io, dia niakatra 700 Ariary ny kapoakan’ny vary teny an-tsena. (Jereo Sary Tohiny)
Mandositra coronavirus, milefa any ambanivolo ny olona. Manararaotra ny hamaroan’ny mpandeha ireo mpitatitra amin’ireo zotra rezionaly mampiasa ny lalam-pirenena faha-5 miala avy eto Toamasina. Tamin’ity alahady 22 marsa 2020 ity dia lasa 20 000 Ariary ny sarandalana Toamasina-Fenoarivo Atsinanana, raha 10 000 Ariary izany omaly. Niakatra ho 30 000 Ariary ny sarandalana Toamasina-Soanierana Ivongo, raha 15 000 Ariary teo aloha. Nanjary 40 000 Ariary ny sarandalana Toamasina-Vavatenina androany alahady raha 20 000 Ariary teo aloha.
Ho fiarovana ny tsy hiparitahan'ny tsimok'aretina Covid19 dia mihato manomboka ny alatsinainy 23 marsa, mandritra ny 15 andro, ny fandraisan'ny ministeran'ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy ireo mpanjifa manerana ny Nosy. (Loharanom-baovao Ministeran'ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy)
« Tsy misy ahiana ny ain'ireo olona telo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Ho ampitaina amintsika miandalana eto ny vaovao mikasika ny fahasalaman'ireo mpandeha izay araha-maso ireo », hoy ny fampitam-baovao nataon’ny ministeran’ny fahasalamana ny tolakandro teo. Io ilay antsoinay hoe : « ‘En bonne santé apparente’, tsy misy ‘fièvre’, tsy mikohaka fa salama tsara izy ireo » hoy Rafalimanantsoa Armand, Talen’ny DVSSER (Direction de la Veille Sanitaire et de la Surveillance Épidémiologique et Riposte) eo anivon’ny ministeran’ny fahasalamana.
Hitsangana manomboka rahampitso alatsinainy ny "Centre Opérationnel Covid-19" izay handrindrana ny fanatanterahana ny fepetra rehetra momba ny fisorohana ny fiparitahan'ny valan'aretina Coronavirus eto Madagasikara. Tapaka nandritra ny famorian’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian, ny OMC National (Organe Mixte de Conception National) androany maraina, teny Mahazoarivo ny hananganana an’ity "Centre Opérationnel Covid-19" ity, izay hanana ny foibe toerany eny amin’ny Mining Business Center Ivato – Antananarivo. Avy ao amin'ny "Centre Opérationnel Covid-19" no hivoaka ny antontan'isa rehetra ofisialy momba ny tranga ahiahiana, ny tranga voamarina, ny isan'olona marary, sy ny fivoarany … manomboka ny alatsinainy 23 marsa 2020. Nambaran'ny Praiminisitra Lehiben'ny Governemanta fa « atao anaty mangarahara tanteraka » ny famoahana izany vaovao izany.